Vaovao - Antony telo mitondra fiara amin'ny fananganana marika ny gorodona plastika vato
Antony telo mitondra fiara amin'ny fananganana marika ny gorodona plastika vato
Ny fivoaran'ny indostrian'ny gorodona plastika vato any Shina dia nanomboka nihamatotra tsikelikely, ary ny làlan'ny fananganana kolontsaina marika an'ny orinasa kely sasany sy salantsalany dia miroso amin'ny dingana sarotra ihany koa. Fananganana fitantanana marika, fantsom-barotra ary maodely ary talenta ara-teknika orinasa no toekarentsika amin'ny ho avy. Fitaovam-piadiana tsara amin'ny fampandrosoana sy fandrosoana. Araka ny fantatsika rehetra, ny gorodona PVC dia mizara ho coil sy lambam-pandriana. Ny gorodona vita amin'ny plastika vato dia miresaka manokana amin'ny ravina. Avy amin'ny rafitra dia mizara ho ravina fototra mitovy homogeneous, ravina multilayer composite ary semi-homogeneous core sheet; avy amin'ny endrika, mizara ho metatra toradroa sy fitaovana esory. Fitaovana fanitso vita amin'ny plastika vato dia mampiasa plastika pvc ho fitaovana lehibe hahazoana sitraka tsikelikely ho an'ny mpanjifa, io dia gorodona plastika vato. Ny gorodona vita amin'ny plastika vato dia antsoina koa hoe tile vita amin'ny plastika vato. Ny anarana ofisialy dia tokony ho "gorodona PVC". Izy io dia karazan-java-haingo amin'ny gorodona vaovao novokarin'ny fikarohana sy fivoarana avo lenta sy avo lenta. Mampiasa vovoka marbra voajanahary izy io mba hamoronana taila gorodona avo lenta sy avo. Ny sosona fototra miorina amin'ny firafitry ny tamba-jotra, ny amboniny dia rakotra fonosana mahazaka fanoherana mahatohitra PVC, izay zahana amin'ny fomba an-jatony. Ireo lafin-javatra telo ireo dia zavatra tena ilaina amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy ny orinasan-tany, indrindra ho an'ny orinasa mpanao gorodona izay ao anatin'ny vanim-potoana fananganana sary.
Nilaza ny mpikarakara ny gorodona fa voalohany indrindra, ho an'ireo mpandraharaha manana hevitra, hevitra ary fahatakarana, mifikitra aminy ary manana fahatsiarovan-tena amin'ny marika amin'ny fananganana marika. Manoloana ny tsy fahampian'ny vola, ny tsy fahampian'ny talenta ary ny vokatra tokana dia hainay tsara ny manararaotra mahita ny tombony sy ny fatiantoka entin'ny orinasa ary ny fisorohana ny fahalemena.
Nilaza ny manam-pahaizana momba ny mpanamboatra gorodona vita amin'ny plastika fa ny talenta ho an'ny taranaka manaraka no hery manosika lehibe indrindra amin'ny fampandrosoana ny orinasa. Eo ambanin'ny ambadiky ny homogenisation ny tsenan'ny gorodona anatiny, ny fahasamihafana misy eo amin'ny vokatra dia mamaritra ny tombotsoan'ny vokatra amin'ny fifaninanana tsena. Raha toa ka maniry orinasa fampandrosoana maharitra ny gorodona dia tsy maintsy manadino ny fiofanana sy ny fampidirana talenta izy ireo.
Ary farany, ny fantsom-barotra sy ny maodely no antony manaparitaka ny fitantanana orinasa hampivoatra haingana sy ara-pahasalamana rehefa henjana ny tontolon'ny gorodona ary kivy ny toe-karena eo amin'ny tsena. Manavaka ny fampandrosoana ny paikadin'i Shina, ary mampitombo ny ezaka amin'ny fampiroboroboana ny marika, ny fikarohana ny teknolojia vokatra ary ny fahaiza-manao fampandrosoana ary ny fomba varotra vokatra mifandraika amin'izany.
Fotoana fandefasana: 05-06-21